PEOPLE CAMPAIGN FORCES OF BURMA (P.C.F.B): ကွမ်းယာ
ဗမာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီရရှိဖြစ်ထွန်းရေးသည် ဗမာနိုင်ငံသားအားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
ရုပ်၊ သံ တေးဂီတ ကဗျာ
က အိန္ဒိယက နေပြန့်ပွားလာခဲ့တာလို့ မှတ်တမ်းတွေကဆိုပါတယ်။(မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့လို့ဆိုချင်သူများ
စဉ်းစားစရာပါ)ကွမ်းယာမှာ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီး၊ ထုံး၊ဆေးရွက်ကြီး(ဗမာဆေး) တို့အဓိကပါဝင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အိန္ဒိယက၀င်တဲ့ အာမွှေး၊နိုင်တီနိုင်း စတဲ့အမွှေးအကြိုင်မျိုးစုံ ထည့်သွင်းလာကြပါတယ်။ ကွမ်းယာကို အပြင်းပြေ၀ါးတဲ့သူက ၀ါးတယ်။ ဆေးရွက်ကြီး အာနိသင်နဲ့ လန်းဆန်းပြီး မအိပ်ချင်အောင် ဆိုပြီးစားတဲ့သူက စားတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်လို့ ဆိုပြီး ကွမ်းယာ ပြောင်းဝါးတဲ့ သူတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ နယ်မှာတုန်းကဆိုရင် မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ကွမ်းယာနဲ့ စလိုက်တာ ညအိပ်ယာ ၀င်မှ ပါးစပ်ထဲက ကွမ်းယာကို ထွေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေအများကြီး တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လူတွေ ကြိုက်ပြီး ၀ါးနေကြတဲ့ ကွမ်းယာဟာ၊ သွားနဲ့ခံတွင်း ပြဿနာကစလို့ အသက်အန္တရာယ် အထိဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ
မေးရိုးအဆစ် ရောဂါရတာ၊ သွားကျောက်တွေတည်ပြီး သွားဖုံးရောဂါတွေရတာပါ။ အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကတော့၊ ခံတွင်းကင်ဆာ၊ အစာမျိုလမ်းကြောင်း ကင်ဆာနဲ့ အသည်းကင်ဆာရောဂါ တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းရွက်ဟာ ဆေးဖက်ဝင် အရွက်ထဲမှာပါပေမယ့်၊ ကွမ်းသီး၊ ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ အမွှေးအကြိုင်တွေမှာ နိုင်ထရိုစမင်း၊ အလ်ကာလွိုက်နဲ့ ပိုလီဖီနောဓာတ်တွေ အပါအ၀င်ကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ဒြပ်ပေါင်းအမျိုး ၃၀လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ ထုံးက ခံတွင်းသားတွေကို လောင်စေပြီး၊ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်တွေအထဲစိမ့်ဝင်အောင်အားပေးပါတယ်။ ကင်ဆာမဖြစ်ခင်အဆင့်မှာ၊ sub mucous fibrosis ဆိုတဲ့ ခံတွင်းသားလွှာလေးတွေ အဖြူရောင်ပြောင်းပြီး မာကျောလာတဲ့ အခြေအနေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တချို့ဆိုပါးစပ်ဟလို့ မရတော့အောင် ဆိုးလာပါတယ်။ leukoplakia, oral lichenplanus လို့ခေါ်တဲ့ အဖြူရောင် အကွက်တွေ ပါးစောင်သားနဲ့ လျှာတွေမှာ ဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေတစစနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းကိုပါးစောင်မှာမြုံထားတတ်တဲ့သူတွေမှာပိုဆိုးပါတယ်။ လျှာကင်ဆာ လျှာကင်ဆာဆိုတာဟာ လျှာရဲ့အရှေ့ ဒါမှမဟုတ် အနောက်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာ အကျိတ်ပါ။ အဖြစ်များဆုံးကင်ဆာ ၁၀ မျိုးထဲမှာ မပါဝင်ပေမယ့် နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း လျှာကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်သူအသစ်တွေ ၄၀ မှ ၅၀ ယောက်ထိရှိနေပါတယ်။ အသက် ငယ်သူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိပေမယ့် အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်လာရင် လျှာကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းမြင့်တက်လာပါတယ်။ လျှာကင်ဆာဟာ ကွမ်းသီးဝါးသူတွေမှာ အဖြစ်များပြီး ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အရက် များများ သောက်သူတွေမှာလည်း လျှာကင်ဆာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရောဂါ လက္ခဏတွေ အနေနဲ့ လျှာပေါ်မှာ နီရဲတာ ဒါမှမဟုတ် အဖြူအကွက်တွေဖြစ်တာ ဒါမှမဟုတ် အကျိတ် ရှိတာ ဒါမှမဟုတ် အနာရှိတာတွေဖြစ်နေပြီး ကုသမှုခံယူပေမယ့် ပျောက်ကင်းမှုမရှိတာပါ။ တချို့မှာ လျှာနဲ့လည်ချောင်းနာတာ ဒါမှမဟုတ် ထုံကျဉ်နေတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေဟာ လျှာကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလို အခြားရောဂါလည်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလက္ခဏာတွေဟာ နှစ်ပတ်အတွင်း မပျောက်ကင်းရင် ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်တာမို့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကုသမှုပိုင်းအနေနဲ့ ကင်ဆာအကျိတ်ကို ခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်ကာ ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်တာနဲ့ ဓာတ်ကင်တာပူးပေါင်းပြီးလုပ်တာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကင်ဆာကျိတ်ဟာ အရေးကြီး နေရင် ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် ကင်ဆာဆေးသွင်းတာနဲ့ ဓာတ်ကင်ဆာပေါင်းစပ်ပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။ လျှာကင်ဆာဟာ လျှာရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ဖြစ်ရင် စကားပြောရတာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ လျှာရဲ့အနောက်ဘက်မှာဖြစ်ရင် အစာမျိုရတာ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ခံတွင်း ကင်ဆာနဲ့ အစာမျိုလမ်းကြောင်း ကင်ဆာတွေဖြစ်ရင် နောက်၅နှစ် အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ အခွင့်အရေးဟာ ၆၀%ထက်မပိုတော့ပါဘူး။ မသေခင်မှာလည်း၊ ဓာတ်ကင်ရတာ ကစလို့ မေးရိုးတခုလုံး လှီးထုတ်ပစ်လိုက်ရတာ၊ လျှာဖြတ်ပစ်လိုက်ရတာစတဲ့ ကုသမှုကြီးတွေနဲ့ကြုံရပြီး၊ အစားမစားနိုင် စကားမပြောနိုင်၊ တပိန်ပိန်တလှီလှီနဲ့ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို မသေမချင်းခံစား ကြရရှာပါတယ်။ သွားဖုံးနှင့် လျှာကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်သည် သွားများ ကျိုးပြတ် ပျက်စီးခြင်း ၊သွားဖုံးလဲ ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်ကာ ပျက်စီး နိုင်သည်ဟု သတိပေးနှိုးဆော်သော်လည်း စားမြဲ စားနေကြပြီး ဖြစ်တော့မှ ဆေးကုမည်ဟု ပြောကြသေးသည် ၊ တကယ်လဲ သွားများကျိုးပြတ်ပျက်စီးသူများမှာ သွားတုများတပ်ကြရမှ ကွမ်းယာပြတ်ကြပါတော့သည်၊ ကွမ်းယာဝါးတာနဲ့ အတူ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ ၊အရက်သောက်တာတွေကလည်း ခံတွင်းနဲ့ အစာမျိုလမ်းကြောင်း ကင်ဆာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သုတေသနတွေအရ ကွမ်းလည်းဝါး ဆေးလိပ်လည်းသောက်ရင်၊ ဆေးလိပ်မသောက် ဘဲ စားတဲ့လူနဲ့စာရင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ၆ဆလောက် မြင့်ပြီး၊ ကွမ်းစားဆေးလိပ်သောက် အရက်သောက်၃မျိုးလုံး လုပ်ရင်တော့ ၁၂၃ ဆ မြင့်သွားပါတယ်။
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မနိုင်ငံ၏ ပုလဲသွယ် မဟာဗျူဟာ
နိုင်ငံရေး = အမြင်
(၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲ အလွန် မြန်မာပြည်
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ
လုံခြုံရေး နှင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စာစဉ်
နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတ (ခင်မမမျိုး)
ဘာသာပြန် သိပ္ပံ ဝတ္ထု
The Best English4U အဂ`်လိပ် စာ လေ့လာကြစို့ 
တိုက်ကြမယ် နိုင်ရမယ် WE FIGHT WE WIN
ယနေ့ မြန်မာ Burma Today
မျက်စိကို စစ်ဆေးသင့်သော ထိပ်တန်း အကြောင်းပြချက် လေးရပ်
မတရားတဲ့ ဥပဒေမှန်သမျှ ဖီဆန်ကြ
လေဖြတ်မည့် လက္ခဏာ ၁၀ ချက်
တကယ်လို့- - - !
IF by phapha
ခွင့်လွှတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မမေ့ဘူး
“ကျွန်မတို့ အတူတကွ ရှေ့ဆက်တိုးတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်
ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုထက်ထိ အဲဒီလမ်းပေါ်
နိုင်ငံတော် (The State) ဆိုရာဝယ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကြုံဖူးးသမျှ မုန်တိုင်းတွေထ...
မသိစိတ်ဆိုတာ - - -
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးရပါစေ ! ! !
ရခိုင်အရေး ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန...
ကွန်ပြူတာစစ်ပွဲ (အပိုင်း ၂)
နိုင်ငံတော် (The State) ဆိုရာဝယ် (အပိုင်း - ၅)
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာမည့် ၃၄ ထပ်မြင့် အေ...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒုက္ခသည်အရေအတွက် နှစ်သောင်းကျော်တိ...
ဝင်းဒိုး 8 အကြောင်းသိကောင်းစရာ
တရုတ် သံရုံး ၏ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ခြေရှုပ် မှု မျာ...
မတရား ပိတ်ပင်တားဆီးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုေ...
မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ တဲ့ဟေ့
ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှုအတွင်း သေဆုံးသူ တစ်ရာကျေ...
မာစီဒီး Biome concept ကား
ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် နေရာကွက်၍ ဈေးကွက်လှုပ်ရ...
ဘယ်သူ့ ကြောင့်လို့ မင်းထင်သလဲ ? ? ?
မြန်မာ့ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ(သို့မဟုတ်) တပ်မတော်...
မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအကြား စစ်ရေး ဆက်နွယ်မှုတွေ...
မင်းပြား ကျိန်းတောင် စေတီ မင်းပြား မြို့ နယ် တွင်...
Myanmar Post ဂျာနယ်၏ မေးမြန်းချက် အပေါ် နိုင်ငံတော်...
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် လက်ကျန် Spitfire တိုက်လေယာဉ် ရှာဖွေေ...
ပွဲပြီး မီးသေ (ကဗျာ)
မနန်းခင်ဇေယျာ ဆုနှစ် ခု ရရှိထား
SOME NIGHT !
ဖိတ်တယ်လို့ ပြောပြီး တကယ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့- - - (ကုတ်ဖ...
ဖားကန့် မှာ လက်နက်ကြီးကျ ၃ယောက်သေ ၃ယောက်နာ
အငြင်းပွားတဲ့ ကျွန်းစုမှာ တရုတ် စစ်ရေး လေ့ကျင့်မယ်...
နောက်ဆုံးအိမ်မက်နဲ့ နီရဲတဲ့နှင်းဆီ (ကိုနေဝင်းနဲ့ က...
လက်ပံတောင်းတောင် ပြည်သူ့ညီလာခံ စတင်
ကျောင်းပုရဝိုတ်မှာ ဒေါင်းအလံစိုက်ကြမယ်....ဟေ့ ( ရေ...
ခွေးရူးကဲ့သို့မြင်ကရာလိုက်ကိုက်နေသော - - - -
မြန်မာနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရအကြား မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ပ...
Laptop အသုံးပြုသူများ သတိပြုရန် (ဗဟုသုတ)
ဝင်လာပြီ မလှုပ်နဲ့ကောင်းသွားမှာပါ !
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ (အပိုင်း- ၈)
တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ရရှိမည့် စနစ်ကို နောက်၃လအတွင...
OIC ရုံးဖွင့်ခွင့် သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးထားပြီးဖြစ...
BURMESE PYTHON ကချင်နွယ်ဖွား အမေရိကန်လူကျော်
ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်ခဲ့ ? (ကာတွန်း)
သင့်ကို မျှော်နေကြတယ် - - -
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ (အပိုင်း- ၇)
OIC ရုံး ဖွင့်မည် မဟုတ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆရာ...
ရမည်းသင်းခရိုင် မိုးထိ မိုးမိဒေသတွင် သတ္တုမြို့ငယ်သ...
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ (အပိုင်း- ၆)
အရွယ်လွန်ရွှေ့ ရှား (ကိုခင်မောင်တိုး ဆို - ကိုရဲလွ...
မန္တလေးသံဃာတွေ OIC ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ (အပိုင်း- ၅)
အဘဆန္ဒ နောင်ဘဝမှာ ပြည့်ဝပါစေ
"မိုးသီးဇွန် (သို့) တောထဲက Blues"
ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်းဦးကျော်ဇောကို အကျဉ်းရုံး သဂြိ...
သမ္မတကို ထောက်ခံ၊ OIC ရုံးအား ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် စစ်တေ...
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော ကွယ...
တရုတ်ပြည်မ ရန်ကင်းဝေးရန် ထိုင်ဝမ် စစ်တပ်တည်နေရာကို...
“လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်း ဧရိယာ အတွင်းရှိမြေသိမ်း...
ကြေးနီစီမံကိန်း ဆန့်ကျင်ရေး ၀ိညာဉ် ကြွေးကြော်သံ လှ...
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ...
မန္တလေး ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဆန္ဒပြသူများ တရားစွဲဆိုခံရ...
ဆီးချိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်ချက်ကို က...
စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး (Negotiation) ဆိုရာဝယ်
မှာတမ်းစကား လက်ဆောင်ပါးလိုက်တဲ့ အဘိုးအို (ကဗျာ)
နဂါးနှင့် တူသော သင်းခွေချပ်
လိမ်ပါတယ်ဆိုမှ ခုချိန်ထိ ထင်ပါတယ်ပြောတုံးမသေး - - ...
ဒါမျိုးလဲ ခံစားကြည့်လေ - - -
လူသားတွေကို အမြဲခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကိုလက်စထရော (ကျန...
သြော်- သူမှ မသိရှာပဲကိုး (ကဗျာ)
အိုဘားမားကို ပြိုင်ဖက် သမ္မတလောင်း အပြင်းအထန်ဝေဖန်
Don't forget Thinking About Tomorrow!. Watermark theme. Powered by Blogger.